Wararka - Daboolista Taleefanka Gacanta ee Ka Wanaagsan Dhismahaaga by KingTone Waxqabadka Sare ee Taleefanka Gacanta ee Kor u Qaadista Taleefannada Gacanta
Daboolista Taleefanka Gacanta ee ka Wanaagsan Dhismahaaga ee KingTone Waxqabadka Sare ee Taleefanka Gacanta ee Kor u Qaadista Taleefannada Gacanta
Maxaad ugu baahan tahay xoojinta signalka unugga dhismahaaga?
Qalabka dhismaha ee dhismayaasha loo isticmaalo sida sibidhka, lebenka, iyo birta, inta badan waxay xannibaan ishaarada unugga ee laga gudbiyo taawarka unugga, iyaga oo xaddidaya ama xitaa gebi ahaanba xannibaya calaamada soo gelitaanka dhismaha.Calaamadaha unugga waxa had iyo jeer xidha carqaladaha jireed ee u dhexeeya munaaradda unugga iyo dhismaha.
Aaladaha mobiladu waa aaladaha muhiimka u ah wax soo saarka, waxqabadka shaqada, iyo badbaadada nolosha.
Xalka kicinta calaamadaha taleefanka gacanta ee ganacsiga ee KingTone waxay hagaajiyaan calaamadaha gacanta gudaha dhismayaasha ganacsiga iyo warshadaha.Kobcinta Xogta iyo Codka.
KingTone wuxuu ku takhasusay caawinta macaamiisha inay ka gudbaan caqabadaha dhisitaanka dhibaatooyinka soo dhawaynta gacanta.Waxaan bixinaa hal ama multi- side DAS (Nidaamka anteenada loo qaybiyay) xal si loo wanaajiyo calaamadaha gacanta gudaha: GSM, CDMA, 3G, iyo 4G signal gacanta.
Sidee u doorataa Ku-celiyaha Taleefanka Gacanta ee Fog-dheer ee Dibadda?
Macaamiil badan ayaa xiisaynaya soo celinta signalka awooda sare si ay u fidiyaan calaamadaha Taleefanka gacanta masaafada dheer ee meelaha daboolan.Laakiin sida loo doorto hal ku celis ah mashruucyadooda si fiican?Aan hoos u akhrino tillaabooyin tillaabooyinka:
1, Raadi xogta mashruuca kahor;
2,Xaqiiji nooca soo noqnoqda ee xigashada;
3,Dalabka & Soo Celinta Maraakiibta;
4,Ku-soo-noqoshada Rakibaadda & Hawlgalka;